City of Darebin | Soomaali
Cashuurta Dawlada hoose - Rates
Marabida iyo xayawaanka kale - Pets
Bay’ada, Noolaha Waari kara, beekhaaminta Tamarta iyo Lacagta - Environment
Baarkin - Parking
Adeegyada carruurta iyo qoysaska Darebin - Children and Family Services
QAANUUNKA MAXALIGA - Local Laws
Dhisidda - Building
maktabadood - Libraries
Adeegyada golaha – dadka iinta leh iyo daryeellayaashooda - Disability Services
Wax badan ka ogow sababta Goluhu u bedelayo sida aan u xusno 26ka Janaayo, iyo helida habab looga qaybqaato waxqabad loo dhan yahay 26ka Janaayo taas oo ixtiraamaysa dadka ka soo jeeda Australia’s Aboriginal iyo Torres Strait Islander.
Muxuu u bedelayaa Golaha Degmada Darebin sida loo xuso 26ka Janaayo?
Waanu bedelaynaa sida aanu u xusno 26ka Janaanyo annaga oo ixtiraamayna Dadka Aborijiniska ah iyo dadka ka yimid Strait Islander, kuwaas oo noo sheegay inay ku dhacdo 26ka Janaayo murugo, xanuun iyo ka midnoqosho la’aan maadaama maalintaasi xusayso bilawgii qabsasho iyo minguurin. 26ka Janaayo iyo taariikhdeedu waa wax ku qalafsan dad badan oo Australiyaana khaasatan dadka Aborijiniska ah iyo dadka ka yimid Torres Strait Islander.
Taas macneheedu Golaha Degmada Darebin wuxuu ka soo horjeedaa Australia miyaa?
Ma aanu nihin dadka Australia ka soo horjeeda, mana diidanin u dabaaldega maalinta qaranimada. Waxaanu ka soo horjeednaa u dabaaldega aqoonsiga qaranimadeena maalinta 26ka Janaayo, maalin ku keenta ciilqab dadka Aborijinaalka ah iyo kuwa ka yimid Torres Strait Islander.
Ma luminaya maalinta fasaxa 26ka Janaayo?
Maya, ma rabno in aan kaa qaadno fasaxaaga 26ka Janaayo. Waxaan raadinaynaa keliya hab laga wada qaybgalo oo ixtiraamaya dhaqan ahaan si loo xuso dabaaldega maalinta qaranimadeena.
Sidee 26ka Janaayo u noqon karaa maalin laga wada qaybgeli karo?
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka qaybqaadato waxqabad loo dhan yahay 26ka Janaayo taas oo ixtiraamta oo aqoonsata Dadka Aborijinaalka ah iyo Torres Strait islander-ka ah. Gal Darebin.vic.gov.au/26janauary si aad u hesho waxyaallaha ku saabsan xarakaadyada ama la hadal Sarkaalka Golaha adiga oo ku hadlaya afkaaga tel: 8470 8470.
Cashuurta Dawlada hoose
Suaal. Waa maxay cashuurta Dawlada hoose?
Cashuurta dhulka waa sanadii hal mar waxaana qaada Golaha Degmada. Lacagta uu bixiyo guri walbaa waxay ku xiran tahay qiimaha guriga.
S. Sidee loo isticmaalaa cashuurtayda?
Jawaab. Cashuurta dhulka oo Goluhu qaadaan waxaa loo isticmaalaa bixinta adeegyada agagaaraha oo ay ka mid yihiin qaadista qashinka, nalaynta wadada, nadiifinta wadooyinka, goobaha gaari dhigashada, maktabadaha, wadooyinka agagaaraha, dhabooyinka, qashin mareenka, adeegyada degdegta ah, guryaha adeegyada daryeelka bulshada guriga.
Macluumaad intaas ka badan fadlan booqo habka cashuur bixinta.
S. Goormaa cashuurtayda layga rabaa?
J. Fadlan la xiriir Golaha tel: 8470 8888 si aad u ta’kiidiso cinwaankaaga iyo faahfaahinta lahaanshaha. Marka dhamaan faahfaahinta la ta’kiidiyo waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad codsato ogeysiinta in dib bixiyo.
S. Sidee u bixin karaa cashuurtayda?
J. Dhamaan cashuur bixiyayaasha ayaa haysta xalalka lacag bixinta soo socda iyada oo la isticmaalayo lacag cadaana, jeeg, kaarka deynta ama kaarka deynta lacagta lagu shubto.
Telefoonka: 1300 954 297
Iyada oo internetka laga gelayo: iyada oo online-ka laga bixinayo
Farac kasta oo ah Australian Post
Warqada boosta la soo dhigo
Iyada oo qof ahaan la tegayo Xarunta Adeega Macmiilaha Darebin
Goluhu wuxuu kaloo bixiyaa adeega in toos lagaaga gooyo afartii biloodba hal mar ama lacag goyn 10 bilood ah. Wixii intaas ka badan oo khuseeya sida lacagta loo qaado booqo Habka Cashuurbixinta
Faahfaah lacag bixineed oo intaas ka badan waxaa laga heli karaa Ogeysiintaada Cashuurbixinta.
S. Xaq ma u leeyahay lacag dhimista cashuurta?
J. Haddii aad haysato kaarka Hawlgabka, DVA (Wasaarada dadka shaqada ka fariista) Gold Repatriation Health Card –TPI (qof gebi ahaan curyaana) ama DVA Gold Repatriation Health Card – Carmal Dagaal, aadna ku nooshahay guriga lagu xusay Ogeysiinta Cashuurbixinta, waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay lacag dhimis.
Haddii aad xaq u leedahay, horayna aad dalab u samaysay, si awtomaatik ah ayaad u hellaysaa lacag dhimis sanad kasta. Haddii aan lacag goyntu muuqan, ama aadan dalab samaysan, fadlan keenso Ogeysiintaada cashuurbixinta iyo kaarka lacag dhimista Xarunta Adeega Macmiilaha Darebin si aad u samayso sixitaanka lagama maarmaanka ah.
Fadlan ogsoonow dadka haysta Kaarka Daryeelka Caafimaadku xaq uma laha lacag dhimistaan.
Macluumaad intaas ka badan fadlan booqo Habka Cashuurbixinta.
Marabida iyo xayawaanka kale
Suaal: Sidee u diiwaangeliyaa bisadayda ama eygayga?
Jawaab. Dhamaan mukulaalaha iyo eyda ka weyn 3 bilood waxaa waajiba in la diiwaangeliyo. Fadlan wac Golaha (03) 8470 8888 si aad u hesho foomka diiwaangelinta xayawaanka, ama kala soo bax koobiga Pets Pemits, Forms and Applications.
Lacag sanadle ah ayaa la isaga qaadayaa diiwaangelinta xawaanka, si kasta ha ahaatee lacag dhaaf ayaa la siin karaa dadka haysta kaarka hawlgabka. Markaad diiwaangeliso, waxaa la siin doonaa taag xayawaankaaga ku xirnaada mar walba. Haddii maribidaadu lunto, taaga ayaa si sahala lagu aqoonsanaya waana laguu soo celinayaa.
Kala soo bax Foomka Dalabka ogolaanshaha Pets Permits, Forms and Applications.
S. Egaygii/bisadayda ayaa fikatay, maxaan samayn karaa?
J. Dhamaan eyda iyo mukulaalaha laga hello iyaga oo iska socda wadooyinka Darebin waxaa laga yaabaa in la qaado lana geeyo Guriga Eyda Lunta (Lost Dogs Home). Waxaad la xiriiri kartaa Guriga Eyda Lunta tel: 9329 2755 si loo arko haddii eygaaga ama bisaadada la qabtay.
Dhamaan marabiyaha la qabto waxaa waajiba in la diiwaangesho intaan la qaadan waxaa la bixinayaa lacag lagu sii daayo.
S. Yaan wacaya si aan ugu sheego ey aan xarig lagu hayn goobaha dadweynaha?
J. Waxaa ka jira dhowr baag oo eyda lagu sii daayo Darebin gudaheeda. Arag Pets in Parks si loo hello liiska baagaga kaas u ogolaada ayda in lagu sii daayo.
J. Wac Golaha tel: 03 8470 8888 si loo qabanqaabiyo sarkaal baara.
S. Yaan wacaya si aan arko xayaan jiran ama dhaawaca?
J. Goluhu wuxu eegayaa keliya eeyo ama bisado jiran ama dhaawaca. Ka wac Golaha (03) 8470 8888 eeyda ama bisadaha. Wac Caawimada Duurjoogta (Wildlife) tel: 1300 094 535
S. Maxaa Golaha degmadu ka samaynayaa sawaxan joogta ah oo uu samaynayo ey qaylinaya ama digaag qaylinaya subaxa hore?
J. Haddii sawaxanka eyda ama digaaga ku dhibayaan, wac Golaha (03) 8470 8888 si aad u gudbiso dacwad. Sarkaalka Golaha ayaa booqan doona guriga oo sii baari doona arrinta. Sarkaalka wuxuu la shaqayn doonaa cidda iska leh xayawaanka si la isugu dayo joojinta sawaxanka. Qofka dacwoonaya faahfaahintiisa waa la qarinayaa waana qarsoodi.
Bay’ada, Noolaha Waari kara, beekhaaminta Tamarta iyo Lacagta
Suaal. Ma jiraan wax lacag dhaaf ah oo la helli karo si aan ugu bixiyo biilkayga tamarta?
J. Xukuumada Fiktooriya waxay siisaa lacag dhimis la xiriirta korontada iyo biilka gaaska dadka guryaha degan oo haysta kaarka dhimista. Tusaale ahaan, korontada waxaa lagaa dhimayaa lacag dhan 17.5% sanada oo dhan, gaaskana waxaa lagaa dhimayaa 17.5% biilka gaaska xilliga qaboobaha. Lacag dhimis ayaa iyadana la helli karaa haddii aad xasaasiyad ka qabto kulaylaha. Fadlan la xiriir shirkadaada tamarta si aad u qabanqaabiso lacag dhimis awtomaatik ah oo laga gooyo biilkaaga tamarta. Ha kala xiiriirin Golaha degmada arrintan.
S. Maxaan samayn karaa si aan hoos ugu dhigo biilkayga tamarta iyo kaarboonka wasakheeya hawada?
J. Waxaa jira waxyaalla waxyar kuugu kacaya amaba aan waxba kuugu kalifayn oo aad samayn karto. Kani waa 15ka qodob oo lagu caawimi karo gurigaaga isticmaalkiisa iyo beekhaaminta lacagta biilka tamarta. Isku celcelis, gurigiiba wuxuu bixiyaa qiyaas ahaan 25c halkii kWh korontada. Tiradaan waxaa loo isticmaalaa in lagu qiyaaso tusaalayaashaan si wax loo beekhaamiyo:
Aallada guriga la dhigo
Dami qaboojiyahaaga ma fadhiisiyaha. Xataa kan yari wuxuu kugu kalifi karaa $104 ilaa $260 korontada sanad walba. Waxaad beekhaamin kartaa wax badan adiga oo daminaya qaboojiyaha cabitaanka asbuuca gudahiisa ama inta u dhexaysa labada xafladood, ama waxaa laga yaabaa inaad go’aan ka gaarto haddii aad u baahanayn sideedaba.
Si dabiici ah dharkaaga u qalaji. Dharka lagu qalajiyo mishiinka wuxuu keenaa 75 senti halkii marba. Waxaad ku qalajin kartaa lacag la’aan adoo ku waraya xariga.
Dami telefishanka marka aadan isticmaalayn. Haddii aad leedahay Balaasmada weyn waxay kugu kalifi kartaa 10 senti saacadii. Moodalada ugu beekhaamin fiicani waxay keenaan 2 senti saacadii. Haddii aad iska dhegaysanayso, waxaa fiican inaad raadiyaha dhegaysato.
Hoos u dhig isticmaalka aan muhiimka ahayn ee aallada. Dami nalkaaga markaad qolka ka baxdo wixii ka badan 10 daqiiqo. Xaaq dhulka halkii aad faakiyuum isticmaali lahayd.
Gado qalabka ay ka muuqato astaanta xiddigaha badan. Marka xiddiguhu badan yihiinba beekhaamintiisu waa badan tahay. Ka hubi tamarta saxda ah ee astaanta si aad isugu eegto qiimaha.
Gaabi mudadaa qubayska. Ku rakib madaxa aalada beekhaaminta oo yaan qubaysku ka badan 4 daqiiqo.
Ku dhaq dharkaaga biyaha qabow halkii aad kaga dhiqi lahayd kulayl waxaadna beekhaamin kartaa $90 sanadii.
Biyaha kulayl 60 digii keliya. Hubi cabiraha kulayliyaha biyahaaga maadaama kulayl intaa ka badani yahay khasaaro.
Kulaylinta iyo qaboojinta
Cabiraha kulaylka gey meesha aad ku qanacsan tahay. 18 digrii ilaa 20 digrii ayaa ugu fiican dadka badankiis hadday qaataan funaanad ama goonada lagu lebisto una isticmaalaan buste kursiga. Halkii digriiba wuxuu hoos u dhigaa 10% qiimaha kulayliyahaaga.
Ka xir gurigaaga daldaloolka. Daldaloolka oo la awdo wuxuu hoos u dhigaa 25% kulaylka lumaya waqtiga qaboobaha. Haddii aad joojin karto bixida kulaylka waxay keeni kartaa isbedel weyn xagga tamarta iyo lacagta biilka ka go’aysa.
Kulaylinta waxtarka ah. Isticmaal gaas dabiici ah oo nooca casriga ah. Kani aad ayuu uga fiican yahay kan korontada maadaama uu ka riqiisan yahay wasakhayntiisa hawaduna yar tahay.
Isticmaal qaboojin waxtar leh. Isticmaal faan ama qaboojiye uumibax leh halkii aad ka isticmaali lahayd mukayf maadama uu isticmaalo koronto yar. Haddii aadan mukayf lahayn, xaraarada gey 26 digrii ama ka badan kulaylaha. Halkii digriiba oo aad kor u qaado cabiraha kulaylaha, waxaad beekhaamin kartaa 10% qiimaha korontada.
Kulayli qolalka aad isticmaasho keliya. Xir meelaha hawadu ka soo gasho iyo albaabada qolalka aadan badanaa isticmaalin si hoos loogu dhigo tamarta la khasaarinayo.
Rakib kuwa saqafka guriga lagu xiro ugu yaraan R.value dhan 3.5. Daboolida saqafku wuxuu badbaadin karaa 45% kulaylka.
Dabool daaqadahaaga. Ku dabool daah ku filan oo buuxa, nooca romanka ama honeycomb ee qabta hawada qabow kaas oo aan lahayn jeexjeex ama dalool hawadu ka soo gasho guriga. Rakibaada belmet ka koreeya daaqada ayaa hoos u dhigi kara kulaylka iyo hawada qabow (LP). Haddii aad ijaaranayso ama aadan awoodin daah, isku day inaad isticmaasho bustayaal.
Tiradaani waa qiyaas keliya. Beekhaaminta saxda ah waxay ku xirnaan doontaa sidaad qalabka u isticmaasho, waxtarkooda iyo inta mid walbaa le’eg yahay iyo weliba qiimaha korontada. Macluumaadkaan waxaa la cusboonaysiiyey Juulay 2012.
S. Goluhu ma bixin karaan talo intaas ka badan ama kaalmo ku saabsan beekhaaminta tamarta iyo hoos u dhigida korontada iyo gaaska, biyaha lagu kuleelyo ilayska qoraxda, baanalka qoraxda ama isbedelka jawiga?
J. Haa. Golaha iyo ururada kale ayaa sameeyey qoraalka ku qoran luqadaada iyaga oo sharxaya hab aad ku yarayn karto tamarta, sidaasna aad hoos ugu dhigi karto waxyaallaha hawada wasakheeya aadna beekhaamin karto korontada iyo biilka gaaska.
Talking My Language iyo qalab kale oo laga yaabo inay isticmaalaan bulshada dhaqan iyo luqad ahaan kala duwan ayaa laga hellaa websaytka Sustainable Homes and Community Program. Halkaan riix si aad aragto (Click here to view).
Qalab Bay’adeed ee luqadaha oo kala duwan ayaa laga yaabaa in laga hello websaytka Fiktooriya ee Bay’ada: http://www.environmentvictoria.org.au/translations
Kaalma intaas ka badan ee luqadaha aan ka ahayn Ingiriis, fadlan la xiriir Khadka Telefoonka Luqadaha badan weydiina inaad la hadasho qaybta Bay’ada (03) 8470 8405.
Alan Pears (2012), The carbon tax needn’t cost you: easy ways to cut energy costs, The Conversation, http://theconversation.edu.au/the-carbon-tax-neednt-cost-you-easy-ways-to-cut-energy-costs-7879
 Resource Smart, http://www.resourcesmart.vic.gov.au/for_households/ideas_at_home.html
 Resource Smart, http://www.resourcesmart.vic.gov.au/for_households_1902.html
Baarkin – Deegaan Ogolaanshaha Gaari Dhigashada Ogolaanshaha gaari dhigashada iinta, ganaaxyo.
Su’aal. Yaa mudan ogolaanshaha Gaari dhigashada Deegaanka?
Jawaab. Ogolaanshaha Gaari dhigashada Degaanka waxaa helli kara qof walba oo joogto u degan waddo (u dhexaysa laba isgoys) oo leh gaari dhigasho xadadan (sida 2 saacadood oo gaari dhigasho ah) ama leh Ogolaansha Meeleed oo dibada ka ah gurigooda. Dhamaan ogolaanshuhu wuxuu dhacaa 28da Febraayo sanad walba.
S. Immisa ogolaansho ayaan helli karaa?
J. Deganayaasha Soonaha A, oo ay ku midoobaan dhamaan kuwa ku jira dukaamada ay ku jiraan guryaha ganacsiga, ayaa mudan hal ogolaansho joogta ah oo ku dhegan gaariga.
Deganayaasha degan Soonaha B, kuwaas oo khuseeya meel gaari dhigashadeedu badan tahay, waxay mudan yihiin ilaa laba (2) ogolaansho. Kani wuxuu noqon karaa isku darka istiikaris ama ogolaansho la xawili karo.
Dadka guriga ku nool oo helli kara gaari dhigashada dibada ah ama aan lahayn gaari ayaa xaq u leh ogolaansho dhigasho oo ah hal mid.
S. Ma u helli karaa ogolaanshaha dhigashada aan joogto ahayn dadka hawlaha qabta ama martida?
J. Deganayaashu waxaa laga yaabaa inay hellaan ogolaansho aan rasmi ahayn oo ugu kacaya ilaa $30.00 muddo gaarsiisan ilaa afar asbuuc? Ogolaanshaha waxaa isticmaali kara dadka hawlaha qabta oo ay hawl geliyeen deganayaashu si ay hawla yaryar uga qabtaan guryahooda ama martida soo booqatay si ay gaariga u dhigtaan meel mudadu xadidan tahay ama soone ogolaanshaha dhigashada la adkeeyey.
S. Yaa mudan ogolaanshaha dhigashada dadka iinta leh?
J. Qof kasta oo joogta u degan degmada Darebin dhexdeeda kaas oo dhakhtarkiisu ama aqoonyahana kale oo takhasus ahi u arkeen in qofkaasi leeyahay iin ayaa xaq u leh inuu dalbado Ogolaanshaha Gaari-dhigashada Iinta.
S. Waa immisa qiimaha ogolaanshaha gaari dhigashadu?
J. Ogolaanshaha Gaari dhigashada Iinta waa lacag la’aan.
S. Immisa nooc oo gaari dhigasho ah ayaa jirra?
1) Ogolaanshaha Gaari dhigashada Iinta:
Wuxuu kuu ogolaadaa inaad dhigato gaarigaaga meel lagu calaamadiyey dadka baabuurta wata oo iinta leh, muda go’an keliya, ama gaari dhigtaan meel caadi ah goob dhigasho laban laab inta la cayimay (inta lacagta lagu bixiyo dhigashada hore, hadday khusayso).
2) Ogolaanshaha Gaari dhigashada Iinta:
Heerka 2aad oo gaari dhigashada qofka wata oo u baahan nasasho markuu socdo wuxuu dhigan karaa gaari meel kasta oo caadi ah ama meelaha la calaamadiyey laban laab inta la cayimay (inta lacagta lagu bixiyo dhigashada hore, hadday khusayso).
S. Maxaa dhacaya haddii aan lumiyo ama la xado ogolaanshahayga?
J. Haddii ogolaanshahaagu lumo ama la xado waa in si degdeg ah loogu sheegaa Degmada Darebin iyada oo la buuxinayo Foomka Caddaynta Sharciga ah. Marka qoraalka sharciga ah la hello qofka leh ogolaanshaha waxaa la siin doona ogolaansho cusub.
S. Maxaa la ii siinayaa ganaaxa gaari dhigashada?
J. Waxaa laga yaabaa in laguu ganaaxay sababa la xiriira in gaarigu muddo meesha oollaa hal meel ama oolaa meel lagu dhigan karo ogolaansho keliya iyada oo aan ogolaansho la haysan. Waxaa kaloo laga yaabaa in lagu ganaaxo haddii aad dhigato barta dabiiciga ah ama aad ku xirto gaariga meesha la marayo. Ganaaxa waxaa laga yaabaa inuu kuu gooyo kormeeraha Gaari dhigashada, iyada oo lagu dhaafayo muraayada wajiga ee gaariga ama cinwaankaaga lagu soo diro.
S. Sidee ku bixinayaa ganaaxa gaari dhigashada?
TEL: Wac 1300 954 297 si aad ugu bixiso Mastercard ama Visa aadna geliso nambarkaaga ganaaxa.
Booqo www.darebin.vic.gov.au si aad ugu bixiso MasterCard ama Visa gelina nambarka ganaaxa.
SHAKHSI AHAAN GOOBTA: Xarun kasta oo Adeega Macmiilaha Darebin.
BOOSTA UGU DIR:
Jeegag ama Money Order oo la siin karo City of Darebin boostada loogu diro
Lacagta lala daahaa waxay keeni kartaa siyaadinta lacagta.
S. Yaa leh masuuliyada bixinta ganaaxa?
J. Qofka gaarigu ku qoran yahay ama dareewalka gaariga watigii gafka la galay ayaa masuul ka ah lacag bixinta gaanaxa. Waa masuuliyada qofka gaariga leh inuu u sheego dareewalka si uu uga fogaado masuuliyada ganaaxa.
Adeegyada Golaha Degmada – Adeegyada carruurta iyo qoysaska Darebin
Suaal: Waxaa maxay adeega Goluhu siiyaa qoysaska iyo carruurta Darebin?
Jawaab. Goluhu wuxuu bixiyaa adeegyo badan oo kala duwan. Magacyada iyo faahfaahinta cidda lala xiriirayo ee dhamaan adeegyadaan waxaa lagu muujiyey boostarka.
Suaal: Waa maxay doorka Kalkaalisada caafimaadka Hooyada iyo Ilmaha xaggeese ka heli karaa kan iigu dhow?
Jawaab: Macluumaadka ku saabsan adeega Hooyada iyo Caafomaadka Ilmaha waxaa laga heli karaa www.darebin.vic.gov.au (baar ‘maternal and child health’) ama wac tel: 03 8470 8298
Suaal: Xaggee ka kiraysan karaa kursiga ilmaha lagu xiro?
Jawaab: laga bilaabo Juulay 2012, kuraasta ilmaha waxaa siin doona deganayaasha Darebin shirkad kuturaad qaadatay. Shaqaalaha shirkadaas ayaa ku rakibi doonta kursiga gurigaaga ama goobta shaqadaada. Toos u wac (03) 9317 3050 ama Adeega Macmiilaha Golaha oo ah (03) 8470 8888.
Suaal: xaggee laga hellaa macluumaadka ku saabsan adeega talaalka:
Jawaab: fadhiyada sanada waxaa lagu soo qoray halkaan: www.darebin.vic.gov.au/immunisation
Suaal. Waa maxay daryeelka ilmuhu?
Jawaab. Xarumaha daryeelka ilmaha ee Darebin waxay siiyaan carruurta daryeel waqti dhiman iyo waqti buuxa ah ilaa da’da dugsiga. Shaqaale khibradoodu aad u sarrayso ayaa ku bixiya bay’ad amaana waxbarasho wax ku oolla taas oo xaqiijinaysa wax ka qabashada baahida ilmaha.
Suaal. Side ku ogaadaa xalalka daryeel ee carruurta Darebin?
Jawaab. Macluumaadka waxaa laga hellaa www.darebin.vic.gov.au/childcare kaas oo uu ku jiro foomka dalabka Xarumaha Daryeelka ilmaha ee bulshadu maamusho. Waxaad kaloo ka helli kartaa goobtaan xarumo daryeel ilmood oo dad gaar ahi maamulaan.
Suaal. Sidee uga dalbadaa boos kindergartenka Darebin?
Jawaab: Dalabyada waxaa laga helli karaa www.darebin.vic.gov.au/kindergarten.
Suaal. Xaggee ku taal maktabada tooyisku goormayse furan tahay?
Jawaab. Maktabada tooyiska ee Darebin waxaa laga heli karaa dhowr goobood iyo waqtiya badan.
Arbacooyinka: 9:30 subaxii – 12.00 Duhurkii, Thornbury – 8A Newcastle Street, Thornbury
Jimcayaasha: 9.30 12.00 Duhurkii Reservoir Community and Learning Centre, 23 Edwardes Street, Reservoir
Sabtiyada: 9:30 – 12 Duhurkii - 8A Newcastle Street, Thornbury
Suaal. Sidee ugu qori karaa ilmahayga barnaamijka Fasaxa ee Dugsiga Hoose?
Jawaab: foomamka diiwaangelinta waxaa laga helli karaa online www.darebin.vic.gov.au/holidayprogram
QAANUUNKA MAXALIGA AH IYO KA WARBIXINTA DHIBAHA DAREBIN
Suaal. Waa maxay ogolaanshaha dhisidu?
Jawaab. Ogolaansahaha dhisiddu waa dukuminti sharci ah oo ku siinaya ogolaansho lagu sameeyo dhismoh iyo/ama shaqo dumin ah. Ogolaanshada dhisiddu waxay xaqiijisaa in shaqada u hogaansan tahay qaanuunka iyo sharciyada kale. Mustawayaashaan waxaa loogu talagalay inay xafidaan amniga iyo caafimaadka dadweynaha iyo dadka isticmaala guryaha.
S. Goorma ayaan u baahnahay ogolaanshaha dhisida?
J. Si guud, waxaad u baahan tahay ogolaansho dhisme shaqo kastoo dhisid iyo dumin ah oo ka dhacda Darebin gudaheeda. Waxaa jira xaallado laga yaabo in aadan u baahnayn ogolaanshaha dhisidda. Inta aadan bilaabin ka hor wax kasta oo dhisma ah, bedelid ah, ama ku darid ama dumin ah, la xiriir unuga Adeegyada Dhisidda oo ku yaalla Golaha tel: 8470 8899 ama sahamiyaha dhisidda gaarka ah haddii aad u baahan tahay ogolaansho.
Fadlan ogsoonow in aan laguu ogolayn inaad bilawdo shaqo dhisme la xiriirta oo dhulka laga samaynayo adiga oo aan haysan Ogolaanshaha Xafidaada Hantida oon dhacsanayn. Ka fiiri Xafidaada Hantida (Asset Protection) wixii faahfaahin dheeri ah.
S. Xaggee ka hellaa ogolaanshaha dhismaha?
J. Waxaad ka helli kartaa ogolaashaha dhisidda gole kasta ama Sahamiyaha Dhisida oo gaar loo leeyahay oo ka diiwaangashan Guddiga Dhisayaasha (Building Practitioners Board). Booqo www.buildingcommission.com.au ama wac 1300 815 127.
S. Sidee ku hellaa ogolaanshaha dhisidda?
J. Waxaa waajiba inaad soo dirto foomka dalabka iyo faahfaahinta kale sida sawirka shaqada, koobi hadda ah oo lahaanshaha iyo lacagta la iska rabo. Degdega hawshu waxay ku xiran tahay sida loo soo dhamaystiro waxa looga baahan yahay dalabka.
Booqo Building Permits, Forms and Applications si aad u hesho foomka dalabka.
S. Intee soconayaa ogolaanshaha dhisiddu?
J. Ogolaanshaha dhisidda ee degaanku wuxuu shaqaynayaa 2 sanadood iyo 3 sanadood oo hawsha ganacsiga la xiriirta. Xasuuso, ogolaanshahaagu waa dhici doonaa haddii dhisidaada ugu horraysaa kormeerkeeda aan lagu samayn 12 bilood dhexdood taariikhda la ansixiyo ogolaanshaha.
Waqtigaan waa la kordhin karaa haddii dalab loo gudbiyo Sahamiyaha Dhisida ka hor inta aan ogolaanshuhu dhicin.
S. Ma codsan karaa bedelidda mustawaha qaanuunka?
J. Haa, waad dalban kartaa warbixin iyo Raali-noqoshada Golaha si aad wax uga bedesho mustawaha qaanuunka. Tusaale ahaan, waxaad dalban kartaa in laga dhiso deyr hore oo ka dheer inta qaanuunku ogol yahay. Golaha ayaa ah hay’ad aqbali karta dalabyadaan. Fadlan ogsoonow, dalabku toos uma balan qaadayo aqbalaada golaha. Dalabyada goluhu diido waxaa rafcaan looga qaadan karaa Guddiga Rafcaanka Dhisida (Building Appeals Board).
Kala soo bax Building Permits, Forms and Applications xaashida la yiraahdo ‘siting requirement’.
S. Maxaa dhacaya haddii aanan haysan ogolaansho?
J. Inaad ku guuldaraysato helidda ogolaanshaha dhisidda ka hor inta aadan bilaabin shaqada waxay keeni kartaa Ogeysiis ama Amar laga soo saaro Dhismaha iyo ganaax uu soo saaro Goluhu. Sidaas darteed waxaa haboon inaad u hogaansanto Qaanuunka Dhisidda adiga oo duminaya dhismaha aan la aqbalin ama la qabto shaqo dhismeed siyaada ah taas oo keeni doonta kharaj si loo buuxiyo shuruuda qaanuunka dhisidda.
S. Ma u baahnahay alaarmiga dabka?
J. Kan qaaca ama dabka sheega ayaa ka hortegi kara dhimasho iyo khasaara weyn oo gaara guriga isaga oo kugu wargeliya dabka.
Dhamaan deganayaasha guryaha, oo ay ku jiraan kuwa degan units-ka iyo falaatyada, waxaa waajib ku ah inay ku rakibaan sheegaha dabka. Kuwa aan u hogaansamin qaanuunka dhismaha waxaa ku dhici kara ciqaab iyo ganaax.
S. Ma u baahnahay deyrka amaanka oo ku wareegsan harada biyaha ama isbaaga (spa)?
J. Dhamaan dadka leh harada dabaasha iyo isbaaga waxaa waajib ku ah inay ku rakibaan deyr amaan iyo/ama waxyaalla kale oo la aqbalay si looga hortaggo in carruurtu ku dhacdo harada biyaha ama isbaaga aan la kormeerin.
Dadka leh waa inay hellaan Ogolaashaha Dhisidda ka hor inta aanay ku rakibin harada biyaha ama isbaagga deyrka loo baahan yahay.
Kala soo bax Building Permits, Forms and Applications xaashida xaqiiqada ‘swimming and Spa safety barriers’.
S. Yaan kala xiriiri karaa macluumaad intaas ka badan?
Waxaad la xiriiri kartaa Unuga Adeegyada Dhisidda ee Degmada tel: 8470 8899 ama Guddiga Dhisida tel: 1300 815 127.
Suaal. Immisa maktabadood ayaa ku yaalla Darebin xaggeese kaga yaalliin?
Golaha Degmada Darebin waxay maamulaan afar maktabadood:
Tixraaca Melwayga: 18 H12
32-38 Seperation Street
Tixraaca Melwayga: 30 F8
Tixraaca Melwayga: 18 G5
Tixraaca Melwayga: 30 K10
Suaal. Sidee ula xiriiraa maktabada?
Jawaab. Waxweydiin guud: 1300 655 355
Adeega tarjubaanka qoraalka ayaa la helli karaa haddii la codsado.
S. Sidee xubin uga noqdaa maktabada maxayse yihiin shuruudaha amaahashadu?
J. Inaad xubin ka noqoto maktabadaha Darebin waa adeeg lacag la’aana.
Si xubin buuxda looga noqdo maktabadaha waxaad u baahan tahay inaad keento aqoonsi muujinaya magacaaga iyo cinwaanka aad hadda degan tahay, sida laysanka gaari wadida, biil ama caddaynta bangiga.
Markaad noqoto xubin buuxda oo maktabadaha Darebin waxaad dalban kartaa ilaa 40 shey muddo 3 asbuuc ah waxaadna helli kartaa waxyaalla kale sida internet lacag la’aana.
Haddii aad booqanayso oo gobol kale ama dibada ka timid aadana ku lahayn cinwaan rasmi ah Fiktooriya, weli xubin waxaad ka noqon kartaa xubin muddo gaaban. Si aad qayb uga noqoto waxaad u baahan doontaa inaad bixiso aqoonsi magacaagu ku yaallo oo gobol kale ama dibada ah.
Xubnaha mudada gaaban ah waxay amaahan karaan ilaa 5 shey muddo 3 asbuuc ah waxayna helli karaan waxyaalla kale sida internet lacag la’aana. Xubinimada mudada gaaban ahi waxay dhacdaa bil ka dib.
S. Waa maxay luqadaha ay wax ku qoran yihiin maktabada Darebin?
J. Maktabadaha Darebin waxay hayaan buugaag iyo magaasiino, fiidiyo, CDs, iyo DVDs ku duban ama ku qoran Carabi, Jayniis, Giriik, Talyaani iyo Fiyatnaamiis.
Fiyatnaamiiska iyo Jayniiska waxaa lagu hayaa maktabada Preston.
Talyaaniga iyo Carabiga waxaa lagu hayaa Maktabada Reservoir.
Giriiga iyo Talyaaniga waxaa lagu hayaa maktabada Northcote.
S. Maxay maktabadu bixisaa?
J. Maktabaduhhu waxay bixiyaan:
Buugaagta sawirada leh
Buugaag ku qoran qoraalla waaweyn
Buugta hadlaysa (CD iyo buugaag hadlaysa oo kumbuyuutar lagala soo bixin karo)
Macluumaadka iyo tixraacyada iyo adeega
Macluumaadka tixraaca online ka ah
Qolalka lagu shiro oo laga kiraysto maktabadaha Northcote iyo Preston.
Internet iyo WiFi lacag la’aana (xubnaha keliya)
Adeega Maktabada ee Guriga
Barnaamijyo kala duwan iyo munaasabado si aad ku ogaato wax badan booqo www.darebinlibraries.vic.gov.au
Kaatalooga Online-ka ah
Adeegyada golaha – dadka iinta leh iyo daryeellayaashooda
Su’aal. Waa maxay adeegyada ay helli karaan kuwa iinta leh iyo qoysaskoodu?
Goluhu wuxuu leeyahay adeegya badan iyo kaalmooyin dadka ugu baahan guriga caawimo ama inay dhexgelaan bulshada, waxaana ka mid ah:
Adeegyada Kaalmada Guriga
Sarkaalka U qaybsanaha Aborijiniska
Adeegyada Carruurta iyo Qoyska
Adeegyada dhalinyarada, oo ay ku jiraan Xarunta Dhalinyarada ee Northland iyo Xarunta Awoodgelinta Dhalinyarada
Macluumaad intaas ka badan ayaa la helli karaa adigoo wacaya 8470 8888
S. Sidee guriga ugu helli karaa caawimo?
J. Kala xiriir adeegyada iinta iyo Dadka da’da ah (03) 8470 8828. Tixraac macluumaad dhowaan la cusboonaysiiyey.
Ka dib, waxaa kula soo xiriiri doona xubin shaqaalaha ka mid ah kaas oo ballan kula samaysan doona si uu kuugu booqdo guriga si uu u qiimeeyo xaq u yeellashadaada una sharxo wixii ku saabsan adeegyada Goluhu bixin karo.
Dhamaan waxweydiinta waxaa la weydiinayaa Kooxda Xawilidda Macluumaadka (03) 8470 8828. Kaalmada luqadda ayaa la helli karaa iyada oo lala xiriirayo Khadka Luqadaha badan (03) 8470 8470 ama adeegga TTY (maqal la’aanta) tel: 8470 8696.
S. Waa maxay Adeegyada Dhimirka oo la helli karaa?
Haddii adiga ama qof aad daryeesho u baahan yahay macluumaad ama talo ku saabsan dhimirka, wac Khadka talada Caafimaadka Maskaxda tel: 1300 280 737, adeegga macluumaadka gobolka oo dhan 24ka saacadood.
Si aad u caawinto in dadka degan Darebin u hellaan macluumaad, talo iyo xawilaad ku saabsan caafimaadka dhimirka iyo nadaamka caafimaadka dhimirka, goluhu wuxuu sameeyey macluumaad jeebka lagu qaadi karo Darebin Mental Health Support Services Guide
Macluumaad intaa ka badan oo ku saabsan Golaha wac (03) 8470 8888
S. Goluhu ma iga caawimi karaa inaan hello barnaamijyada bulshada iyo xarakaadka?
J. Macluumaadka ku saabsan bulshada iyo xarakaadka mujtamaca Darebin wac Darebin MetroAccess Officer (03) 8470 8368.
Macluumaadka ku saabsan cayaaraha Darebin iyo fursadaha madadaalada wac isku-xiraha Access for All Abilities (03) 8470 8396.
Haddii aad tahay qof iin leh oo jira 18 – 65 sanadood welina aad ku nooshahay guriga, waad ka helli kartaa caawimo Darebin Community Recreational Facilitator si laguugu xiriiriyo adeegyada iyo xarakaadyada aad danaynayso. La xiriir CRF tel: (03) 8470 8308.
S. Darebin ma leedahay gooba cayaareed oo carruurta iyo daryeellayaasha dadka iinta leh?
J. Macluumaad ku saabsan goobaha cayaaraha oo la isticmaali karo waxaa laga hellaa warsidaha Bulshada Darebin waxayna ku hoostaal Accessible Playspaces. Macluumaadka ku saabsan qorshaha Golaha ee goobaha cayaaraha ee la isticmaali karo waxaa laga helli karaa Darebin Playspace Strategy, iyada ku hoos taalla Access for People with Disability. Arag Playspaces and Skateparks
S. Waa maxay kaalmada ay helli karaan carruurta dadka dhaqan ahaan iyo luqad ahaan kala duwan heerka hore ee carruurnimada?
Sarkaalka goobta ee dugsiga ka hor wuxuu ka caawimaa carruurta barnaamijyada kindergarten-ka oo kharajkooda la bixiyey
Kuwa iinta iyo daahidda koritaanka qaba – iyo carruurta qabta dib u dhac yar oo garasho ama qaba loolan dabeecadeed, iyo carruurta qabta iima kala duwan
Caruurta qabta baahiyo kala duwan kana tirsan dadka dhaqan ahaan iyo luqad ahaan kala duwan
Aborijinaalka iyo kuwa asalkoodu ka yimid Torres Strait Islander
Kuwa la kulmay saxariir
S. Kaalma noocee ah ayay helli karaan kuwa qaba hilmaanka ee degan Darebin?
Arag macluumaadka dhowaan la cusboonaysiiyey
S. Sidee ku helli karaa ogolaansahaha inaan gaariga dhigto meelaha dadka iinta leh baabuurta dhigtaan waana maxay shuruucda loo isticmaalkeeda?
Dhamaan macluumaadka Ogolaanshaha Gaari dhigashada Dadka iinta leh waxay ku hoos qoran yihiin Su’aalaha Inta Badan soo Noqnoqda ee ku saabsan ogalaanshaha baarkinada (‘Frequently Asked Questions for Parking Permits’).
Kala soo bax foomka dalabka Parking Permits, Forms and Applications
Wac Adeega Macmiilaha (03) 8470 8888 iyada oo qoraalla.
Booqo Darebin Customer Service Centre si aad u hesho foomka dalabka.
S. sidee ku helli karaa koobiyada dukumintiga oo qaab kale ah?
J. Dhamaan dukumintiyada waxaa lagu helli karaa qaab kale iyada oo la codsanayo. Qaababkaas waxaa ka mid ah daabacaad weyn, mid elektaroonig ah (CD ama email), maqal, luqado kale iyo hab warqad ah.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad uga hesho dukumintiga golaha si qaab kale ah fadlan wac Adeega macmiilaha (03) 8470 8888.
S. Sidee u dacwoon karaa haddii Golaha Darebin si aan xaq ahayn iila dhaqmo iintayda darteed?
J. Haddii aadan ku faraxsanayn adeegga goluhu ku siiyo waxaad samayn kartaa dacwad adiga oo noola hadlaya qof ahaan, diraya telefoon, fakis iyo email ama online. Haddii aadan hubin jahada aad u baahan tahay inaad la hadasho wac Darebin Customer Service Centre
Haddii aan weli dacwadaada laga jawaabin, waxaad kala xiriiri kartaa Qorsheeyaha Iinta wixii talo iyo caawima siyaada ah (03) 8470 8888.
S. Maxaa Goluhu ka caawimayaa oo u dhaafid ah?
J. Darebin wuxuu kaalmeeyaa Victorian Seniors Card, Victorian Companion Card iyo Victorian Carer Card
Fadlan ka arag websaytka wixii macluumaad ah ee intaas ka badan ama wac Adeega Macmiilaha ee Darebin (03) 8470 8888 si aad u hesho meelaha Darebin ee laga hello qiimo dhimista.